Ebe nchekwa ezinụlọ - IntoKildare
Nwee ezumike ezinụlọ
Enwere ọtụtụ ihe maka ezinụlọ na ụmụaka nke afọ niile ịhụ na ime na Kildare ihu igwe ọ bụla ma ọ bụ ọnọdụ ya. Site na obere tots ruo ndị na -eto eto, enwere mmemme ga -adabara onye ọ bụla!
Ndị na -eto eto na obere tots nwere ọtụtụ ihe na -atọ ụtọ na Co. Kildare. Mpaghara a juputara na nnukwu nhọrọ maka ụbọchị ezumike ezinụlọ, site na izute ụmụ anụmanụ mara mma na go-karts na Clonfert Pet Farm ruo golf nzu na zip zip na Kildare Maze. Ọbụna nke ka mma, enwere anụrị maka onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ a ma ama na Irish National Stud, nke na-agwakọta ịma mma na ịdị jụụ nke ubi mara mma na ebe egwuregwu na-atọ ụtọ, ịgagharị n'okirikiri ihe nkiri na ọmarịcha ụzọ akụkọ ifo.
K Oge ezumike Naas
Awardlọ egwuregwu ntụrụndụ na-emeri emeri na mgbatị na 25m ọdọ mmiri, spa, klaasị ahụike na usoro mbara igwe dị maka mmadụ niile.
Ruo ọtụtụ oge KBowl na-atọ ọchị bụ ebe ịnọ na Bowling, Wacky World -ebe ụmụaka na-egwu egwu, KZone na KDiner.
Adventure & IheCafes